हलमा फेरि पुरानै फिल्म - Worldnews.com
हलमा फेरि पुरानै फिल्म
दैशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुने भएपछि देशभरका हलमा नयाँ फिल्म देखिन छोडेको छ। निर्वाचनका कारण दर्शक पनि त्यसमा व्यस्त हुने र हलमा नआउने भएका कारण निर्मँताहरुले आफ्ना नयाँ फिल्म रिलिजमा नल्याएका कारण हलहरुमा अहिले पुरानो फिल्मले डेरा जमाएको छ।
गत मंसिर १० मा भएको पहिलो चरणको निर्वाचन र आज बिहीबार हुन लागेको
ट्रक ड्राइभरदेखि जय भोलेसम्म
रश्मी थापा, रंगकर्मी, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वितरक तथा प्रदर्शक, ३ दशक लामो कलायात्रामा एउटै व्यक्तिले बनाएको थरीथरीको परिचय हो यो। यो परिचय हो अशोक शर्माको। शर्मा १३...
News of Nepal 2018-09-29
विदुर गिरी वर्ष २०७३ नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि धेरै चर्चा र थोरै मात्र सफलताको वर्ष सावित भएको छ । वर्षभरिमा ७ दर्जन फिल्म रिलिजमा आए । तर अत्यधिक सफलता भने एक दर्जनजति...
फर्कियो फिल्मको क्रेज
विदुर गिरी वर्ष २०७४ शुरु भएको ३ महिना बितेपछि नेपाली फिल्म क्षेत्रले बल्ल व्यापारिक सफलताको स्वाद चाख्न पाएको छ। केही महिनादेखि सुनसानप्रायः नेपाली फिल्म लागेका हलहरुमा ३...
News of Nepal 2017-08-01
घटस्थापनामा आउने छक्का पञ्जा ३ ट्रेलरमा
लोकप्रिय हास्य सिरिज फिल्म छक्का पन्जा ३ ले अचानक रिलिज डेट घोषणा गर्दै आप्mनो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ। नामको आधारको यो सिरिज फिल्मले शनिबार बिहान राजधानीमा एक कार्यक्रम...
लोकप्रिय हास्य सिरिज फिल्म छक्का पन्जा ३ ले अचानक रिलिज डेट घोषणा गर्दै आप्mनो ट्रेलर सार्वजनिक गरेको छ। नामको आधारको यो सिरिज फिल्मले शनिबार बिहान राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी रिलिज डेट घोषणा गर्दै ट्रेलर सार्वजनिक गरेको हो। छक्का पञ्जासँगै फिल्मकर्मी अशोक शर्माको फिल्म जय भोले पनि दशैंमै आउने भएपछि दुबै फिल्मले रिलिज डेट घोषणा गरेका थिएनन्। छक्का पञ्जा आगामी २४ गते...
विदेशी फिल्म देखाउने हल बक्स अफिसको विरोधमा
विदुर गिरी ८ वर्षअघि उठेको बक्स अफिस प्रणाली लागँ हुने भएपछि केही हल सञ्चालकले यसलाई रोक्ने कोशिस गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलले आफ्नै परिवारको हल गोपीकृष्ण मुभिजबाट यो प्रणालीको परीक्षण शुरू गरी अन्य हलमा समेत परीक्षण शुरू गर्न दबाब दिएपछि विदेशी फिल्म चलाएर स्वदेशी फिल्मको हिसाब देखाएर कर छली गर्ने केही हल सञ्चालकले बक्स अफिस लागँ हुन नदिने कोशिस...
डा. डीआर उपाध्याय नेपालको संविधान जारी भएको २ वर्षपछि संविधानले तोकेबमोजिमका मंसिर १० गते पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ७४ सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछी बल्ल थाहा हुनेछ, संघीयता के हो ? र, संघीयताले...
कृले ब्युँतायो बिहानी शो मन पराइयो अनमोलको न्यु लुक्स
विदुर गिरी शुक्रबार रिलिजमा आएको बहुप्रतिष्ठित फिल्म कृले सिनेमा हलको बिहानी शोसमेत ब्युताउँदै सुखद् ओपनिङ गरेको छ। ‘पहिले–पहिले मर्निङ शोमा १०⁄२० जना मान्छे देखिन्थे। शुक्रबार त कृ हेर्न चाहने दर्शकको भीडले धेरैजसो हल हाउसफुल देखियो’, वितरक गोपाल कायस्थले नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै भने– ‘हिन्दी फिल्म प्याडम्यानसँगै रिलिजमा आए पनि कृको ओपनिङ राम्रो भयो।’ निर्माण शुरू...
प्रदेशको सभाहलमा पानी चुहिने भएपछि सबै लज्जित
सुर्खेत । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सुर्खेतको हलमा अस्थायीरूपमा सञ्चालन हुँदै आएको कर्णाली प्रदेशको सभाहलमा पानी चुहिन थालेको छ । अलि बढी पानी पर्ने बित्तिकै सभाहल चुहिन थाल्छ । हल चुहिँदा प्रदेशसभा सदस्यहरु बैठकमा जोगिएर बस्नुपर्दछ । राजधानी सुर्खेतजस्तो ठाउँमा सभा भवन नै चुहिने भएपछि सबैलाई लज्जित बनाएको छ । यसो हुनुमा गुणस्तरहीन भवन, नियमित मर्मत् सम्भार नहुनु र घर पुराना हुँदै...